IYurophu yeNqwelomoya yeHonga
"Ikhefu leNsimbi alizange lifike emhlabeni kwaye ngaphantsi kwalo liphuma umgquba wamanzi ovela eNtshonalanga." - Umbhali waseRashiya ongumprojekthi waseRussia u-Alexander Solzhenitsyn, ngo-1994.
I-'Contain Curtain 'ibinzana elisetyenziselwa ukuchaza isahluko semvelo, imfundiso kunye nempi yaseYurophu phakathi kwamazwe aseNtshona nakumazantsi asempumalanga kunye neempuma, iintlanga zamaKomanisi ezilawulwa yiSoviet ngexesha leMfazwe yeCold , ngo-1945-1991. (Iipaleni zensimbi zaye zithintela izithintelo zetsimbi kwiidrafri zaseJamani ezenzelwe ukuyeka ukusasazeka komlilo ukusuka kwisiteji ukuya kwesinye isakhiwo ngexesha ukukhutshwa ngokuhlelekile kwenzeke.) Iidemokhrasi zasentshona kunye neSoviet Union zazilwela njengamadlelane ngexesha leMfazwe Yehlabathi yesiBini , kodwa nangaphambi kokuba uxolo lufikeleleke, babejikeleza ngokukrakra kwaye bakrokre.
Amabutho ase-United States, i-UK kunye ne-allied ayekhupha iindawo ezinkulu zaseYurophu kwaye ayezimisele ukubuyisela le nto ibe yiidemokhrasi, kodwa ngoxa i-USSR yayiye yakhulula imimandla emikhulu (eMpuma) eYurophu, ayizange ikhulule yonke into kodwa yayihlala kwaye bazimisele ukudala ama-puppets aseSoviet ukudala indawo yesikhombisi, kungekhona intando yesininzi .
Ngokuqondakalayo, iidemokhrasi ze-liberal kunye nolawulo luka-Stalin lokubulala ubukhomanisi abazange bafikelele, kwaye ngelixa abaninzi basentshonalanga bahlala beqiniseka ngokulungileyo kwe-USSR, abanye abaninzi babethuswa yinto engathandekiyo lo bukhosi obutsha, baza babona umda apho Iibhloko zegunya zidibene njengento eyoyikisayo.
Ibinzana elithi 'Ikhonkco lensimbi,' elibhekiselele kwimeko enobungozi kwaye engenakukhunjulwa kwendawo yokwahlula, yathandwa nguWinston Churchill entetho yakhe ngoMatshi 5, 1946, xa wathi:
"Kusuka kwi-Stettin eBaltic ukuya kwiTrieste e-Adriatic" ikhefu lentsimbi "liye liwela kwilizwe lonke lase-Yurophu. , IBucharest kunye neSofia; zonke ezi zixeko ezidumileyo kunye nabantu abazungezile bahlala kwinto endimele ndiyibize i-Soviet sphere, kwaye zonke zizithobela, ngenye indlela okanye enye, kungekhona nje kuphela kwimpembelelo yeSoviet kodwa kwimeko ephakamileyo kwaye kwezinye iimeko umlinganiselo wolawulo lwaseMoscow. "
UChurchill wayekade esebenzisa eli thuba kwii-telegram ezimbini kuMongameli wase-United States uTruman .
Umdala Kunokuba Sasizicingile
Nangona kunjalo, eli xesha, eliye labuyela kwikhulu le-18, mhlawumbi lisetyenziswe okokuqala malunga neRashiya nguVassily Rozanov ngo-1918 xa wabhala: "Ikhusi lesinyithi lihla kwimbali yaseRussia." Kwakusetyenziswe kwakhona nguEthel Snowden ngowe-1920 encwadini ethiwa yiBolshevik Russia kunye ne-WWII nguJoseph Goebbels kunye nompolitiki waseJamani uLutz Schwerin von Krosigk, zombini kwi-propaganda.
Abaninzi abasecaleni baseNtshona-ntshona babecala ukuchazwa njengoko babecinga iRashiya njengexesha lokulwa kunye nexesha elidlulileyo, kodwa eli xesha lalingana neCold War Divisions eYurophu, njengokuba iBurlin yaseBerlin yaba yinto ebonakalayo yoluhlu. Amacandelo omabini enza iinzame zokuhambisa iNqwelomoya yeHonga ngale ndlela kwaye, kodwa imfazwe 'yokutshisa' ayizange iphele, kwaye ikhethini yehla kunye nokuphela kweNtsholongwane yeCold ekupheleni kwekhulu lemashumi mabini.
Ukuzonwabisa kumaphulo omlilo
Fumana i-Ballet yeLa Sylphide
Umlilo oMnandi kakhulu weHome Home Heating
Kufuneka - kufuneka - kufuneka
I-Tmesis: I-Grammatical and Rhetorical Term